နောက် ဆုံး ရ ရွှေ ဈေး နှုန်း များ
24.10.2013 (Thursday) 02:43 PM
TOP SHINE (PH : 011-201155)
(အကယ်ဒမီ) Ygn: (ဝယ်) 688000 - (ရောင်း) 689000
(အကယ်ဒမီ) Mdy: (ဝယ်) 688000 - (ရောင်း) 689000
(အခြားတံဆိပ်) Mdy: (ဝယ်) 685500 - (ရောင်း) 687500
At 10/24/2013 04:16:00 PM No comments:
ရွှေသား ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနေသည့် သစ်ပင်များ
သာမန်အားဖြင့် အဖိုးထိုက်တန်သော ရွှေသတ္တုသည် မြေကြီးထဲမှသာ တူးဖော် ရရှိသော်လည်း အချို့သော သစ်ပင်များတွင် ရွှေသား ပါဝင်နေကြောင်း သုတေသီများက ဆိုသည်။
At 10/24/2013 04:14:00 PM No comments:
တစ်ပတ်အတွင်း ရွှေဈေး ကျပ်တစ်သောင်း မြင့်တက်
ယခုလအတွင်း တည်ငြိမ်နေသည့် ပြည်တွင်းရွှေဈေး အတက်ဘက်သို့ ပြန် လည်ဦးမော့ လာနေကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
At 10/24/2013 04:13:00 PM No comments:
ရထား သန့်စင်ခန်းတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ရထားလမ်းပေါ်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့သည့် ကလေးငယ် ကံကောင်း ထောက်မစွာ အသက်ရှင်
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ နာဒီယာ ခရိုင် ပါလာရှီ ရထား ဘူတာရုံ အနီးတွင် အောက်တိုဘာ ၂၂ရက် ည ၆နာရီခွဲ ဝန်းကျင်က လာဂိုလာ ခရီးသည်တင် ရထားတစ်စင်းပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ဦးသည် ရထားသွားနေစဉ်သန့်စင်ခန်း အသုံးပြုနေရင်း ကလေး မီးဖွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
At 10/24/2013 04:02:00 PM No comments:
ကင်မ်ဂျုံအန်မှာ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်း ရှိခဲ့သလား
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်သည် လက်ရှိဇနီးသည် ရီဆိုဂျူနှင့် လက်ထပ်ခါနီး ဆဲဆဲတွင် အခြားအနုပညာ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သော Seo Un-hyang နှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့သည် ဟူသော ကောလာ ဟာလများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုကာလများတွင် လက်ရှိဇနီးသည် ရီဆိုဂျူမှာ First Lady နေရာအတွက် ပြိုင်ဘက်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုကြသည်။
At 10/24/2013 04:00:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာမြို့နယ် တွင် နတ်စင်ချောင်း တံတား ပျက်စီးပြိုကျ၍ ဒေသခံများ မီးရထား သံလမ်းပေါ်က ခက်ခဲစွာ သွားလာနေကြရ
ပြိုကျပျက်စီး သွားသော နတ်စင်ချောင်း တံတား အနီးရှိ (၃)ပေအကျယ် မီးရထား သံလမ်းပေါ် ခက်ခဲစွာ ဖြတ်သန်း အသုံးပြုနေရပုံ
မိတ္ထီလာ ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၁၃
မိတ္ထီလာ မြို့နယ် ဂဠုန်ကုန်း ကျေးရွာ အတွင်းရှိ ရှင်မြို့ ၊ ခါးကော့ ၊ ရွာမ ၊ မြင်သာ ၊ သဲတောလေး စသည့် ကျေးရွာ များမှ နေ့စဉ် ဖြတ်သန်း သွားလာ အသုံးပြု နေသည့် နတ်စင်ချောင်း တံတားမှာ အောက် တိုဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ပျက်စီး ပြိုကျပြီး ချောင်းရေ ထဲ မျောပါသွား ၍ ကျေးရွာ များ နေ ဒေသခံများ သွားလာရန် ခက်ခဲလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
At 10/24/2013 03:58:00 PM No comments:
လင်မယား စကားများရာမှ ၁ဝ လသား အရွယ် ကလေးသေဆုံး
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ် အလယ်ရွာ ကျေးရွာ၌ လင်မယား ချင်း စကားများ ရာမှ ယောက်ျားဖြစ်သူက ရဲဒင်းဖြင့် ခုတ်ရာ ၁ဝ လသားအရွယ် ကလေးငယ် တစ်ဦး သေ ဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
At 10/24/2013 01:47:00 PM No comments:
အမျိုးတစ်ဦးတည်းနေထိုင်သည့် နေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်၍ လူသတ်ပစ္စည်းယူဆောင်သူအား ဖမ်းဆီးရမိ
၁၁.၁၀.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၉၃၀အချိန် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်နေ၊ ဒေါ်သန်းမြိုင်သည် ၎င်းတစ်ဦးတည်းနေထိုင်သည့်နေအိမ်နောက်ဖေးရေချိုးခန်းတွင် လဲကျနေသည်ကို ၎င်း၏တူဖြစ်သူ ကိုမင်းအောင်မှတွေ့ရှိ၍ သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံသို့ ပို့အပ်ရာသေဆုံးနေကြောင်း သိရသဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့မ ရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားမှုအား သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ်(၄၇/ ၂၀၁၃)ဖြင့်ရေး ဖွင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
At 10/24/2013 01:40:00 PM No comments:
ကားဖိုးငွေ သိန်းတစ်ထောင့်ကိုးရာကျော် မပေးဟုစွပ်စွဲကာ အမှုဖွင့် တိုင်တန်း
ကားဖိုးငွေ သိန်းတစ်ထောင့်ကိုးရာကျော်အား ပေးသွင်းခြင်းမရှိသဖြင့် အရေးယူပေးရန် တိုင်တန်းမှု တစ်ခုကို လသာရဲစခန်းက အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင် အမှုဖွင့်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
At 10/24/2013 11:57:00 AM No comments:
ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအဆိပ်အပြင်းဆုံး သတ္တဝါ - ငါးဘောလုံး (Puffer fish)
Puffer fish ကိုအမျိုးမျိုးခေါ်ပါတယ်။ ငါးဘောလုံး၊ ကမ္ဘာ့ငါး၊ ပူဖာငါး၊ ငါးလေးထိုး၊ ပင်လယ်ဘူဇွာ၊ ငါးစည်ဖောင်း တို့အပြင် အခြားနည်းလမ်း အမျိုးမျိုးနဲ့လည်း ခေါ်ဝေါ်ပါသေးတယ်။
သူ့ကို ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအဆိပ်အပြင်းဆုံး သတ္တဝါလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အမျိုးအစားပေါင်း ၁၂၀ ရှိပြီး ၁၂၀လုံး အဆိပ်ပြင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိပ် ပြင်းတဲ့ အရည်အသွေးချင်းတော့ မတူပါဘူး။ ဂျပန်မှာဆိုရင် ပင်လယ် Puffer ကို စားသုံးနေပါသေးတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ရှိတဲ့ စားဖိုမှူးများ က စားလို့ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို အသေအချာ သိလုိ့ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ တော်ရုံ လူတော့ မစားရဲပါဘူး။ ဂျပန် တံငှာသည် အနည်းငယ်ပဲ စားသောက်ရဲ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
At 10/24/2013 11:45:00 AM No comments:
At 10/24/2013 11:40:00 AM No comments:
ဇနီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန်ရှိသည့်ကိစ္စ စကားများပြီး ယောက်ျားဖြစ်သူ ဆွဲကြိုးချသေဆုံး
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဇနီးဖြစ်သူကိုယ်ဝန်ရှိသည့်ကိစ္စဖြင့် စကား များကြရာမှ ယောက်ျားဖြစ်သူ ဆွဲကြိုးချသေဆုံးခဲ့မှု တစ်ခု အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဆို သည်။
At 10/24/2013 11:31:00 AM No comments:
တစ်နိုင်ငံလုံး ၀ိုင်ဖိုင်အင်တာနက်လိုင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် Broadband Wireless(Wifi) အင်တာနက်လိုင်းရရှိရန် လုပ်ဆောင်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်တွင် ပြော သည်။
At 10/24/2013 10:28:00 AM No comments:
ပြင်ဦးလွင်ပေတဒါန (ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ) .. ဗဟုသုတ အလို့ငှာ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်.... ကြောက်လန့် တက်သူများ မဖတ်ရ....
ပြင်ဦးလွင်(၈)မိုင် သုဿာန်ထဲက ပေတဒါန အလှူပွဲဓါတ်ပုံတွေပါ။
(၂၈.၅.၂၀၁၁) တွင် ရိုက်ကူးသောဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်ရိုးရိုး တမလွန်ဘုံသားများ စားသောက်ရန် ပြင်ဆင်တည်ခင်းရာ နေရာ
At 10/24/2013 09:57:00 AM No comments:
ဒလမြို့နယ် ကျန်စစ်သား ရပ်ကွက်ရှိ ကျူးကျော်တဲများကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းပေးရန် ငါးကြိမ်မြောက် အမိန့်ထုတ်ပြန်
ဒလမြို့နယ်၊ ကျန်စစ်သား ရပ်ကွက် အမှိုက်ပုံအနီးရှိ ကျူးကျော်တဲများကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းပေးရန် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက ငါးကြိမ်မြောက် အမိန့်ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
At 10/24/2013 09:39:00 AM No comments:
မြန်မာနှင့်ထိုင်း ဗီဇာမလိုဘဲ အပြန်အလှန် သွားလာနိုင်တော့မည်
ထိုင်းနိုင်ငံ လေဆိပ် ၂၃ ခုတွင် မြန်မာခရီးသွားများ ၀င်ထွက်နိုင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့အကြား ခရီးသွားလာခွင့် ဗီဇာမလိုဘဲ ခွင့်ပြုရက် ၁၄ ရက်အထိ နှစ်နိုင်ငံ ခရီး သွားများအပြန်အလှန် ခရီးသွားလာနိုင်မည့်အစီအစဉ်ကို နှစ်ဖက်အစိုးရတို့ နိုဝင်ဘာလအတွင်း သဘော တူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်ရှိပြီး အတည်ပြုနိုင်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mr Teerat Ratanasevi (မစ္စတာ ရာဒ်တနဇေ၀ီ)က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
At 10/24/2013 09:31:00 AM No comments:
KIA မှ ရှမ်းရွာ(၁၀၀)ကျော်အား ဆက်ကြေးပေးဆောင်ရန် စာပို့ထား
KIA မှ ဗန်းမော်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်များမှ ရှမ်းရွာ (၁၀၀)ကျော်အား တအိမ်လျှင် ငွေကျပ်(၂၀၀၀၀ိ) စီကို ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်ကြေးပေးဆောင်ရန် စာများပေးပို့ထားကြောင်း ဗန်မော်ဒေသခံ တစ်ဦးမှ သတင်းပေးပို့ထားပါသည်။...
At 10/24/2013 09:23:00 AM No comments:
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများအပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် CCTV ကင်မရာများ ရောင်းအားတက်
စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် အောက်တိုဘာလထဲတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းခွင် များတွင် CCTV ကင်မရာများကို တပ်ဆင်မှု များလာသောကြောင့် CCTV ကင်မရာ ရောင်းအားတက် လျက်ရှိကြောင်း ရှေ့ဆောင် နည်းပညာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဒေါ်နိုင်နိုင်မော်က ပြောသည်။
At 10/24/2013 09:20:00 AM No comments:
ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းမှ ရသော ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် ရမ်းဗြဲသို့ လာမည့်နှစ်အတွင်း ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမည်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှရသော ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် သို့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန် လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု လျှပ် စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ဒု-၀န်ကြီးဦးအောင်သန်းဦးက အောက်တိုဘာ ၂၃ က ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ကတိပြု ပြောဆိုလိုက်သည်။
At 10/24/2013 08:51:00 AM No comments:
အစိုးရနှင့် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီတို့၏ တတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ခုနစ်ချက် ချမှတ်နိုင်ခဲ့
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) တို့၏ တတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို လွိုင်ကော်မြို့ တွင် အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်တို့တွင် နှစ်ရက်တာ ကျင်းပခဲ့ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် ခုနစ်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့သည်။
At 10/24/2013 08:44:00 AM No comments:
သေဒဏ်ကျ အီရန်အကျဉ်းသား ကြိူးစင်တင်ပြီးနောက် ကိုးမားဖြစ်ကာ အသက် ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ရ
အီရန်တွင် သေဒဏ်ကျ အကျဉ်းသားတစ်ဦးကို ကြိုးစင်တင်ကာ စီရင်ပြီးနောက်ပိုင်း အသက်မသေဘဲ ကိုးမားဖြစ်သွား၍ အသက်ဆက်လက် ရှင်သန်ခွင့် ရသွားကြောင်း IRNA သတင်းဌာနက အောက်တိုဘာ ၂၁ရက်က ကြေညာခဲ့သည်။
At 10/24/2013 08:41:00 AM No comments:
မော်ဒယ်လေး.....နာမည်ကြီးချင်လို့ လား? လူသိများချင်လို့ လား?(ဒါမှမဟုတ်) ၀ါသနာအရ ကိုယ့်ပုံကိုယ်တင် တာလား?
အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ဆေးကို ဒီတပတ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု ကဏ္ဍကနေ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် နေပြီဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ ကောင်းကျိုး တွေကတော့ ဖော်ပြလို့ မကုန်နှိုင်အောင် များတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက် နည်းပညာ တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေလဲ မခွဲမခွာတွဲပါ လာတာ ကိုလဲ မြင်နေရ ပြန်ပါတယ်။
At 10/24/2013 08:28:00 AM No comments:
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်များကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု ၀န်ခံထားသူ စောမြင့်လွင်နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ခုနစ်ဦးအား ဆက်လက် စစ်ဆေးရာ အခြားကွင်းဆက်နှင့် ပါဝင်သူအချို့ကို ထပ်မံ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ
ပြည်တွင်း၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်များကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု ၀န်ခံထားသူ စောမြင့်လွင်နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ခုနစ်ဦးကို ဆက်လက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ အခြားကွင်းဆက် အချို့နှင့် ပါဝင်သူအချို့ကို ထပ်မံ ဖမ်းဆီးပြီး ဖော်ထုတ် စစ်ဆေးနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် ရဲချုပ်ဇော်ဝင်း၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲမှူးကြီး ကိုကိုအောင်က အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် Daily Eleven သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
At 10/24/2013 08:12:00 AM No comments:
မြန်မာကျောင်းသားများ ပညာသင်ဆုရရှိရေး သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် သြစတြေးလျ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဆွေးနွေး
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် သြစတြေးလျ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းတို့အား အောက်တိ်ုဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်)
နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Hon.Bob Hawke ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
At 10/24/2013 07:50:00 AM No comments:
အခြေခံဥပဒေ ဆွေးနွေးပွဲ တောင်ကြီးမှာ NLDကျင်းပ
တောင်ကြီးခရိုင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပညာပေးဆွေးနွေး ပွဲကို တောင်ကြီးမြို့၊ ညောင်ဖြူစခန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ မြေဖြူစာကြည့်တိုက်မှာ ဒီနေ့မနက်က ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
At 10/24/2013 07:46:00 AM No comments:
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အရေးကြီးကြောင်း ဗြိတိန် ပြောကြား
ဗြိတိန်မင်းသားချားစ်၊ ဇနီးသည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ လန်ဒန်မြို့၌ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် (Photo:AFP)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗြိတိန် ၀န်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ၀ီလျံဟိတ်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီး ဂျက်စတင်းဂရင်းနင်းတို့နှင့် လန်ဒန်မြို့၌ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်က တွေ့ဆုံရာတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
At 10/24/2013 07:30:00 AM No comments: